နွယ်နွယ်ချို – Hlataw.com
ဟယ်လို“မဟုတ်ဘူးရှင့် ဖုန်းမှားနေပါတယ် ”နွယ်နွယ်ချို စိတ်ရှုတ်နေရတဲ့အထည်း ဘယ်က ဖုန်းလာမှားမှန်းမသိဘူး ဟုတ်တယ်လေ အခု ည 12 နာရီကျော်နေပြီ သားဖြစ်သူ မောင်ထွေးက ပြန်မလာသေး ဖအေလုပ်သူဦးမြင့်ထွေးကလည်းပူရကောင်းမှန်းမသိ အိပ်နေလိုက်တာများဟင်း ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို စိတ်ညစ်ညူးနေပြီသည် သူများအမျိုးသားဦးမြင့်ထွေးမှာ ကားဝယ်ရောင်းလုပ်တယ် အသက်က ၅၁ သားဖြစ်သူမောင်ထွေးက အခုကျောင်းပြီးလိုရပ်ကွက်ထည်းမှာဝေလေလေနဲ့အသက်သာ ၂၆ နှစ်ရှိနေပြီ ဒေါ်နွယ်နွယ်ချိုကတော အသက်ကလေး ၄၆ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့ အရွယ်က အဟိုင်းကြီးထည်းကတောမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး ဘယ်လိုပြောရမလဲပေါနော် ဝါဝါခိုင်တို့ဘဆိုက်ပေါလေ မင်းသမီးကြီးဝါဝါခိုင်တောင် ကိုယ့်လောက် တင်တွေရင်တွေသေးနေသေးတယ်ဟင့်ဟင့် တခါတခါများသားရဲ့သူငယ်ချင်းတွေအကြည့်တွေက အို့ ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို့ကိုရင်တွေခုန်စေတယ်သိလား ဟူးငါ့အတွေးတေကဘယ်တွေရောက်နေပါလိမ့် ဟောသားတောမောင်ပြန်လာပါပြီတော် ..” သားရယ်မင်းလည်းနောက်ကြလိုက်တာ အမေလုပ်သူစိတ်မူမှမတွေးဘူးလား”” မေမေကလည်းသားသူငယ်ချင်းတွေနဲ့လမ်းထိတ်မှာ ဂစ်တာတီးနေတာပါ”” ကဲ့ကဲ့ သားအိပ်တော ”
သားဖြစ်သူ အိပ်ရောက်မှတွေးလက်စအတွေးလေးတွေကိုပြန်တွေးနေမိတယ် သူမနဲ့ ယောက်ကျားလုပ်သူ တချိန်ကလိုးနေတာလေးတွေကိုတွေးရင်အိပ်ပျော်သွားပါတောတယ်~~~” ဟာ ကိုကြီး မောင်ထွေး အခြေနေ”” မကောင်းပါဘူးငါ့ညီရာ ”တကယ်တော ကိုယ်ထွေး မနေ့ညက သူကြောင်နေကြဖြစ်တဲ့ မယ်ယမင်းဆိုတဲ့ ကောင်မလေးအိမ်မှာဂစ်တာသွားတီးတာ သူ့ကောင်မဘက်က ဘာမှမဖြစ်လာဘူးလေ ဘာမှဖြစ်မလာဆိုကောင်မလေးက သူ သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ နေရဲ ဆိုတဲ့ ချာတိတ်လေးကိုကြွေနေတာ မောင်ထွေးသိသည် ဒါပေမဲ့ယောက်ကျားဆိုတာ ရအောင်ယူနိုင်ဖို့အတွက် သူကြံနေတာ သူစိတ်သူဘဲအသိဆုံးကိုး” ငါ ညီ နေရဲ ကိုယ်တို လက်ဖရည်ဆိုင်သွားရအောင်ညီ မင်းအားတယ်မဟုတ်လား”” ဟာ အကိုကျွန်တောကို အမေ ဈေးလေးနည်းနည်း ဝယ်ခိုင်းလိုက် ပြီရင်လာခဲ့မယ်လေနော်”” အေးအေး ငါစောင့်နေမယ် ညီ ”ဒီနဲ့ နေရဲ ဈေးထည်းမှာ ဝယ်စရာရှိတာဝယ်ရင်း စော်ကြီးတွေရဲ ဖင်းကြီးတွေလည်းကြည့်ရင်ပေါ ဟိုဟာဝယ်လိုက် ဒီဟာဝယ်လိုက်နဲ့ပေါ ထိုအချိန်မှာ သူ့မျက်ဝန်းတစုံကို အဖန်စားဆုံးဖြစ်တဲ့ ကြက်သူဖြူဆိုင်ရှေ့မှာ ဖင်ကြီးကိုကုန်းပြီကြက်သွန်ဖြူကိုအားပါတရရွေးဝယ်နေတဲ့ ကိုမောင်ထွေးအမေ ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို ကိုဝင်လုံးဖို့အတွက် စဉ်းစားနေတောတယ် ဟ စော်ကြည့်ဝယ်ပြီပြီထင်တယ် ငါဒီကောင်မကြီးကိုလမ်းကြိုလိုက်မလားမေးကြည့်ဦးမှ” အန်တီ နွယ် အန်တီနွယ် ”ရုတ်တရပ် အနှောက်မှ ခေါ်သံကြောင့် ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို လှည့်ကြည့်လိုက်လေသည်” ဪ နေရဲ သားပါလား ဈေးလာဝယ်တာလား သား”” ဟုတ်အန်တီ တစ်ယောက်ထည်းလား ကိုယ်ကြီးထွေးမပါဘူးလား”ခါတိုင်းမောင်ထွေးလိုက်ပို့နေကြဖြစ်သည်”သူလား မပြောချင်ပါဘူးငါ့သားရယ် လူပြင်းရယ် ”” ဒါဆိုသားနဲ့ လိုက်ခဲ့လေ အန်တီနွယ်”
” အေးအေး သားရောဘအကုန်ဝယ်ပြီးပြီလား ”” အင်း ”” ဆိုင်ကယ်ထုတ်လိုက်ဦးမယ်နော် အန်တီနွယ် ””အေးအေးခြင်းတောင်းပေး အန်တီကို ”နေရဲ ဆိုင်ကယ်ထုပ်ပြီပြလာရင် စော်ကြီးနဲ့စကားပြောရင်ကိုရင်ကခုန်နေသည် ဟူးရင်မောလိုက်တာ ချစ်နွယ်ရယ် စော်ကြီးကခြင်း နှစ်ခုနဲ့စောင့်နေသည် နေရဲအကြည်တွေကိုသူမသိသည် ထိုပေမဲ့သားအရွယ်တောင်မရှိသေးတဲ့ကလေးက ကိုယ့်ကိုစကားပြောနေရင်း အကြည့်စူးစူးတွေကြောင့် ဒေါ်နွယ်နွယ်ချိုရင်ခုလိူင့်မောမိတာတောအမှန်ပင် ထိုစဉ် …” အန်တီနွယ် ရပြီ””အေးအေး”နေရဲ ဆိုင်ကယ်မ 125 ရုပ်ဆိုးဆိုင်ကယ်ဖြစ်သည် နောက် ဖေါက်က မြှောက်ထားသည်ဆိုတောအကိုက်ပေါ ရှေ့မောင်းရဲ့မောင်ကြားကို ဒေါ်နွယ်နွယ် ခြင်းကိုထည့်ညွပ် ဒေါ်နွယ်နွယ်ချိုကအနောက်နေ နေရဲခြင်းလေးကိုမောင်ပေါ်တင်ပြီး နေရဲ ခါးလေးကိုကိုင်လိုက်တာပေါ နေရဲ ဆိုင်ကယ်လေးမှာ ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို တက်ထိုင်လိုက်ယုံနဲ့ ဝတ်သွားတယ် နေရဲ ဆိုင်ကယ်သာမောင်းနေရတယ် ဒေါ်နွယ်နွယ်ချိုရဲ့ နို့ကြီးက နေရဲ ကျောပြင်နဲ့ အိကနဲ့အိကနဲ့ နေအောင်ကပ်ကပ်သွားတယ် ဒါကြောင် နေရဲမောင်ရင်နဲ့ လီးကြီးကတောင်တင်းနေတယ် ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို ကတောစိတ်ထည်းမှာ သာယာသလိုရှိပေမဲ့ ကိုယ့်လူကြီးဖြစ်နေတော ထိန်းနေရတယ်လေ ဒါပေမဲ့ ဦးနှောက်က ထိန်းပေမဲ့ အဓိက ဖြစ်တဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီး က အရည်တွေထွက်နေပြီဆိုတာကိုယ့်ကိုကိုယ်ဘဲအသိကိုဆရာကြီးတွေလို မရေးတက်ပါဘူး မနည်းကြိုးစားရေးထားတာပါ.. နေရဲ ဒေါ်နွယ်နွယ်ချိုကို အနောက်မှာတင်ပြီးမောင်ရတာ တလောကလုံးကိုမေ့နေသလိုဘဲ စော်ကြီးက ခါးကိုလက်က ကိုင်ပြီသူရင်သားကြီး နဲ့လာလာထိနေတာကိုက အရမ်းဖီးဖြစ်နေခဲ့တယ် ဘာလို့ဆို စော်ကြီးနို့ကြီးတွေနဲ့မထိ ထိအောင်ကိုတမင်လုပ်နေရတာလေ နောက်ကြောယာသလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ သူနို့ကြီးနဲ့ထိနိုင်သမျာထိအောင်လုပ်နေရတာပေါ ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို အိမ်က နေရဲ တို့အိမ်ကနေ တစ်ရပ်ကွက်ကျော်ကျော်မှာပါ အရင်က နေရဲ တို့ရပ်ကွက်ကလေ. နေရဲ အိမ်ရောက်တော ခြင်းပေးပြီး ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို အိမ်ကိုလိုက်ပြန်ပို့ပေးရတာပေါ ဒီလိုနဲ့ ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို အိမ်ရောက်ပြီ အိမ်ရောက်တော ဒေါ်နွယ်နွယ်ချိုက အရှေ့က လျှောက် နေက အနောက်ကနေကောင်းကောင်း ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို ရဲ့ ဖင်ကြီးကိုကြည့်ရင်းလီးက တင်းတထက် တင်းလာက ဆီးအိမ်တောင်အောင့်လာတာနဲ့ …
” သားနေရဲ အိမ်မှာထမင်းစားပြီးမှပြန်နော်သား”လှည့်အပြော နေရဲ မှ သူမ ဖင်ကြီးကို စားမတက်ဝါးမတက်ကြည့်နေတာကိုမိသွားတော ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို အနေရခက်ခက်နဲ့ နေရဲမှလည် သူခိုးလိုမိသလို ရှက်ရှက်နဲ့ ရေခဲသတ္တာ နားကိုသွားပြီ ရေဘူးယူသောက်နေရ သလို ဒေါ်နွယ်နွယ်ချိုမှ အိမ်သာဘက်သို့သွာပြီးသူမ ဝတ်လာတဲ့ အောက်ခံဘောင်းဘီလေးကိုချွတ်ပြီးဆီးသွားရလေသည် ဆီးသွားရင် ဟွန့် မသာလေး လူကို များကြည့်လိုက်တာ ကြည့်လိုက်တာ ဟူး သူမ စောက်ဖုတ်ကြီးကိုရေသေခြာဆေးပြီး အင်းဘာလို့လို့နဲ့ငါ့ဟာလေးကိုး အလိုးမခံရတာကြာပြီ ဦးမြင့်ထွေးကလည်းမလိုးနိုင်တော အလိုးခံချင်မိတာတော ကြားပြီး ထိန်းနေရတာလေ စောက်ဖုတ်ကြီးကလည်းသူ ဓာတ်စာ ဖြစ်တဲ့နေရဲလီးကြီးကို မြင်ပြီး ဂုဏ်ညင်း ဖားကြီးလိုမို့ဖောင်းကတင်းပြီး စောက်စိကြီးမှလည်း ထော်ပတ် ပဲစေ့လောက်ခန် ထောင်ကြွ လာတယ် … အိမ်သာမှအထွက်ကောင်လေးကသူမခိုးကြည့်နေတယ်လေးဟွန့် မသာလေး လူများ စိတ်ထည်းကပြောနေပေမဲ့” ဟူး အခုမှပေါ့သွားတာဘဲ ”သူဟာသူပြောသလိုလိုနဲ့ နေရဲမှ အိမ်သာထည်းကိုပြန်ဝင်သွားလေသည် ဒေါ်နွယ်နွယ်တို့ အိမ်မှာ ပျင်ထောင်နှစ်ထက် အိမ်ကလေးဆိုပေမဲ့ ရေချိုးခန်းအိမ်သာက တွဲရက်ဆို တော ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး လျှောမဲ့အဝတ်တွေထည့်ထားတဲ့ ဒံဇလုံးကြီးကိုမြင်စိကရောက်သွားမိတယ် ဒေါ်နွယ်နွယ် ချိုရဲ့ အတွင်းခံဘောင်ဘီလေးကိုမြင်မိတယ် ကိုယ်လိုးချင်နေတဲ့စော်ကြီးအတွင်းခံဆိုတဲ့စိတ်ကအသိနဲ့လက်က အတွင်းခံကို ကိုင်မိသာဖြစ်သွားပီ အတွင်းခံအရောင်က အသားရောင်လေးဖြစ်ပြီ ရိုးဆင်းတယ် ဘာမှအလှမဘူးဘောင်းပြီမှာလေ ကြည့်ရတာ အခမြှချွတ်ထားပုံရတယ်ဗျာ ဒါနဲ့ စော်ကြီးစောက်ဖုတ်နဲ့ ဝတ်တိုင့်ကပ်နေမဲ့ စောက်ဖုတ်နေရာလေးကိုကြည့်လို့တော အရောင်လေးကဝါညစ်ညစ်နဲ့ စိုတိုတိုလေးဖြစ်နေတယ်
စိတ်ကမရတောဘူး လီးကတအားတောင်နေပြီ ဘောင်ပြီခွကြားလေးကိုနှခေါင်းဝတေ့ပြီအားပတရ ရူလိုက်တာ အားပါး ကောင်းလိုက်တာကွာ စောက်ဖုတ်နဲ့လေးကသင်းနေတာဘဲ ညှီစို့စို့အနံလေးကလည်း နေရဲစိတ်ကို လုံးဝ ထိန်ချူပ်လို့မရတောဘူး အတွင်းခံလေးကို လီးမှာပတ် စောက်ခေါင်းရှိနေမဲ့နေရာလေးကိုလီးထိတ်နဲ့ ထားပြီး ထုတာ စိတ်ထည်းမှစော်ကြီးကိုတကယ်လို့နေရတယ်လို့ကိုထင်နေမိတယ် မျက်လုံးထည်းမှာလဲ စော်ကြီးကိုအားပတရ လိုးနေသလိုခံစားရတယ် အား နွယ်နွယ် နွယ်နွယ်မောင်ပြီးတောမယ်ချစ် ချစ်စောက်ဖုတ်ကြီးကိုမောင်လိုးနေတယ်ချစ် အားလီးရည်တွေအများကြီးအတွင်းခံထည်းမှာထည့်လိုက်တယ် လီးကိုတောင်ပေနေတဲ့အတွင်းခံလေးနဲ့ထက်သုတ်ပြီးအဝတ်အဟောင်းကန်လေးထည်းပြန်ထည်းထားပြီထွက်လာခဲ့တယ် အိမ်ရှေ့မှာ သားမိနှစ်ယောက်စကားပြောသံ ကြားလိုက်ရတယ်” ဟာနေရဲ ညီ အမေ့ကိုဈေးက ခေါ်လာတာဆိုညီ ”” အား ကိုကြီးထွေး ဘယ်ကပြန်လာတာလဲ ”မျက်နာတောပူသားဗျာ အခုဘဲသူ့အမေစောက်ဖုတ်ကြီးကိုမှန်းလိုးထားတာ ကိုထွေးကိုမြင်တော နည်းနည်း စိတ်ထည်း ရှက်သလိုလို မလုံသလိုတောဖြစ်မိသားဗျာ ..” လာငါညီ ကိုယ့်အခန်းသွားရအောင်””ဟုတ် ကိုကြီးထွေး”ထိုစဉ်မီးဖိုချောင်မှ ဒေါ်နွယ်နွယ်ချိုမှ ….” ဟိုနှစ်ယောက် အပေါ်မှာမဆူကြနဲ့ဦးနော် ”” ဟုတ်မေမေ”ပြောလည်ပြောချင်စရာဘဲလေ ကိုထွေးမှာ အပေါ်ထက်မှတစ်ယောက်ထည်းသူအပိုင်စားရထားတဲ့နေရာမပြသစ်ချင်းအကျယ်ကြီးဖွင်ပြီ နေတက်တယ်လေ တခါတလေများ ထမင်းမစားဟင်းမစားအခန်းထည်းလည်းနေချင်နေတက်တာကိုး နှစ်ယောက်သားသစ်ချင်းနားထောင်ရင်း face book သုံးရင်စကားပြောရင်အလုပ်တွေရူပ်နေကြတာပေါ
” ဟာ အမေကလည်းလိုင်းပေါ်မှာပါလား”ကိုထွေးမှထိုသို့ပြောစဉ် နေရဲမှဘာရယ်မဟုတ်ကြည့်မိသည်” ကိုကြီးထွေး အန်တီနွယ်က ဘာနာမည်နဲ့လည်း”” ဪ အမေက Rose black ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့သုံးတာလေ ညီ ”” ဟုတ်လာ ကိုကြီထွေး လူကြီးဆိုတော သတင်းလိုင်းဆုံမှာဘဲ ညီလည် အပ်လိုက်ဦးမယ် ”ကိုထွေးမှာ အမှားကြီးကျူးလွန်မိသွားတာကို သူမသိလိုက်မိဘူး နေရဲ က အကောက်ကိုကြည့်ပြီ သူရဲ့ sex acc နဲ့ လှန်လိုက်တယ် ကိုထွေးမသိအောင်လေ ဒီလိုနဲ့ နေရဲအောက်ထက်ကိုသွားလိုက်တယ် ပြီတော ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို နားလေးမရောင်လည်းရောင်လည်လေးလုပ်ပြီ” အန်တီနွယ် ဖုန်းထည်းမှာဘာသစ်ချင်တွေပါလည် သားနည်းနည်းလောက်ကူးချင်လို့ ”” ဪ အေးသား ဖုန်းက စာပွဲပေါ်မယ် ယူလေသား”” ဟုတ်”ပျော်ရွင်စွာနဲ့ လိုင်းဖွင်ပြီသူအကောင့်ကို လက်ခံပေးလိုက်တယ် သစ်ချင်းကူးသလိုလိုဘာလိုလိုတောလုပ်ပြရသေးတယ်လေllနေ့လည်စာတွေဘာတွေစားသောက်ပြီအိမ်ပြန်ခဲ့တယ် နှစ်နာရီလောက်က စော်ကြီးလိုင်းပေါ်ရှိလားတက်ကြည့်လိုက် ဟာ ဆင်းသွားတာသုံးမိနစ်ဘဲကွာ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဟိုင်းထာလိုက်တယ် တရေးတမောအိပ်ပြီ ညနေထ အပေါင်းသင်းတွေနဲ့ကလေရိုက်ည. ကိုးနာရီလောက်ကြအိမ်ပြန်လာ ပြီထမင်းတောင်မစားဘဲအခန်းထည်းဝင်ပြီးလိုင်းပေါ်တန်းတက်တောတာဘဲ စော်ကြီးကလိုင်းပေါ်မရှိသေးတာနဲ့ ဒေါက်တာဗိုက်ကလေးတို ဆရာ ဒုတ်ညိုကြီးတို အပြာစာအုပ်တွေလိုက်ဖတ်နေမိတယ် မည်မျှ ကြာသွားတယ်မသိ နာရြီကြည့်လိုက်တော 10 နာရီ 15 တောင်ဖြစ်နေပြီ ဒါနဲ့ ချက်ဘောက်ဝင်ပြီ စော်ကြီးမီးစိမ်းနေတာတွေ့မိတယ် ပျော်သွာတာပေါ စော်ကြီးက ပြန်hi ထားတယ်ကျွန်တောဖုန်းက mi max ဆိုတော မက်စစ်က သပ်သပ်ဝင်ကြည့်ရတာလေ
” hi နေကောင်းလား ”” inn ကောင်းပါတယ် သူရော ”ဟ စော်ကြီးက မစိုးဘူးဟ အခြေနေကောင်းလောက်မှာဘဲ ဒါနဲ့ ကျွန်တောက” fri ဘယ်ကလဲ ကျွန်တောက …… က ပါ ””Inn တို့က …….ကလေ ”စော်ကြီးကအမှန်ပြောတာဘဲ ကိုကသာလိမ်နေတာတချားမြို့ကိုရှောက်ပြောတာသူက အမှန်ပြောတာဘဲဟ” ဟုတ် Rose black နားမည်ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဗျာ”” နွယ်နွယ် ပါ frivရော ”” ဟုတ်မောင်ရဲပါ ကျွန်တောအသက်အခု…..ပါ ””aww ဒါဆိုမင်းက ဒို့သားထက်ငယ်တာပေါနော် ”” တို့အသက်က ၄၆ နှစ် လေ ”” ဟုတ် ကျွန်တောတခုလောက်ပြောလို့ရမလားဗျာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပေါနော် ”ဒေါ်နွယ်နွယ်ချိုနည်းနည်းစဉ်းစားမိသွားတယ်ဘာလာပေါ နော် ကိုယ်ကဘာမှမပြောရခင်မှာဘဲ တဖက်က ကောင်လေးက free call ခေါ်လိုက်တယ် ရုပ်တရက်ဆိုတောလန့်သွားမိပေမဲ့ ဘေးမှာယောက်ကျားလုပ်သူအိပ်နေလို့တောသေးတယ် ဘာလဲမသိပေမဲ့ freecallကိုကိုင်မိလိုက်တယ် free callက video call ဖြစ်နေတော ဖုန်းကိုနာကျပ်တပ်ထားတောကိုင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ တဖတ်ကလူငယ်လေးရဲ့ ကြီးမှားထွားကြိုင်းတဲ့လီးကြီးကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ် အလေး ရုပ်တရက်လန့်ပြီဖုန်းကို ဘေးဘက်ကိုလည့်လိုက်ရတယ် ယောက်ကျားကိူလည်းကြည့်ရင်ပေါ ယောက်ကျားလုပ်သူက အိပ်တာမှဟောက်တောင်နေသေး တဖတ်က ကောင်လေးကလည်းလီးကြီးကိုဂွင်းထုပြနေတယ်အဲ့အချိန်မှာ စဉ်းစားဖို့အတွက် မေ့နေတယ် ဘာလုပ်မလဲဆိုတာကိုလည် မသိဖြစ်နေမိတယ် လီးနဲ့ပျက်နေတာလဲကာပြီဆိုတော လူငယ်လေးရဲ့လီးကြီးကိုမျက်လုံးကမခွာနိုင်အောင်ဖြစ်မိပြန်တယ် အလိုလိုလက်လဲ မိမိ စောက်ဖုတ်ကြီးကိုပွတ်မိပြီးသာဖြစ်နေတယ် အရာအားလုံးက သူဟာသူ လှူပ်ရှာနေသလိုကြီးအသိညဏ်တွေကင်မဲ့နေတယ် သူကိုသူလည်သိပါငါဘာဖြစ်နေလဲဆို ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်လူချင်သိနာမှမဟုတ်တာဘဲလေဆိုပြီ အတွေးနဲ့စိတ်ဆန္ဒနောက်ကိုလက်မိပြန်တယ်မိမိစောက်ဖုတ်ကြီးကလဲ အရည်တွေရွဲနေပြီ သူမတောင်းတနေတဲ့လီးကြီးသူမ မျက်စိရှေ့မှာမြင်နေရပြီလေ
သူ့ယောက်ျား အနှစ်၂၀ ဆယ်ကျော်ကျော်သူမကိုလိုးလာတဲ့လီးထက် နှစ်ဆလောက်ကြီးတဲ့လီးကြီး ကိုတွေ့တောမနေနိုင်တောဘူစိတ်က စောက်စိကြီးကိုဖိဖိ ပွတ်နေပြီတယ် ထမိန်လည် ရွဲနေပြီ တဖတ်ကကောင်လေးကလည်းလီးကြီးကိုဂွင်းထုရင်သူမကိုဘာတွေပြောနေမှန်းမသိဘူး မမ မြင်ရလားမေးရင်သူမက အင်း ဘဲဖြေနိုင်တယ် သူလည်ထုကိုကလည်ပွတ်နေသူမဘက်က video call ကိုတောဖွင့်ပေမထားတာ သူဘက်က အရှက်သက်သာတာပေါ သူမ အရမ်းကောင်းပြီးသူမအသံကို နေရဲ ကြားနေရတယ် ကြိတ်ပြီ ညီးနေပုံဘဲ တချက်တချက် အင်း အင်းအား ဆိုပြီ အုပ်အုပ်ကလေးကြားနေရတယ်” မမ ပြီးအောင်ပွတ်နော် ကျွန်တောလီးကြီးကိုမမ မြင်အောင်ကြည့်”” မမစောက်ခါင်းထည်းကိုဝင်နေတယ်လို့သဘောထားပြီ ပွတ်ပေးနော်မမ ”သူကလည်း အင်းတလုံးဘဲဖြေပြီ မော်သွားတယ် ဟင်းဆိုတဲ့သက်ပြင်းချမှဘဲနေရဲသိလိုက်တောတယ်စော်ကြီပြီပြီဆိုတာကို နေရဲ ပြီးအောင်ဂွင်းထုပြတယ်လီးရည်တွေထွက်တာကိုသေချာရိုက်ပြတယ် ခဏငြိမ်နေပြီးမှ နေရဲစပြီ” hello မမ ကောင်းလား ဟင် ”စော်ကြီးစီကစာပြန်မလာဘူး ရှက်နေပုံရတယ်” hello ”” မမ အိပ်သွားပြီလား ”ဒေါ်နွယ်နွယ်ချိုမှ” inn အိပ်တောမယ် လူညစ်လေး ”” ဟဟဟဟ မမကလည်းကောင်းဖို့ဘဲလေမဟုတ်ဖူးလား ”” မသိဘူးသွား အိပ်တာမယ်ဒါဘဲကွာ ”” innပါမမ see u နော်မမ ”” good night ပါ မ..ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို ဘဝမှာတခါမှမကြားဖူး မမြင်ဖူးမတွေးဖူးတဲ့အလုပ်တခုလုပ်မိတယ် လိုင်းပေါ်မှာ သူစိမ်းကောင်လေးနဲ့ sex ချက်တယ်ဆိုလားဘာလာ လုပ်မီတယ် ရင်တွေခုန်တာခုထိမပျောက်သေ လိုင်းပေါ်က ကောင်လေးလီးကြီးကလဲ အမလေး နည်းတာကြီးမဟုတ်ဘူး အပြင်မှာ သာတကယ်အလိုးခံလိုက်ရရင်တော တွေးရင်ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို ရန်တွေခုန်နေတာဘဲ ကောင်လေးပို့ပေးထားတဲ့ သူလီးဓာတ်ပုံတွေကလည် ရှိသေးတယ် ကြည့်ချင်စိတ်အရမ်းဖြစ်လာမိတယ် တော်ပြီတောပြီ ငါတောမလွယ်တောဘူး ကိုယ်ကိုကိုယ် ပြန်ပြီးထိန်းနေရတယ် ကိုမြင့်ထွေးကတော ကားပွဲစားတန်းသွားပြီ ဈေးကသွားရတောမည် ဈေးချင်းလေကိုင်ပြီထွက်လာခဲ့တယ် ဟာလာပြီဟ စော်ကြီ နေရဲစော်ကြီးလာမဲ့လမ်းကနေလမ်းကျုံသလိုလိုနဲ့ နေရဲကလည်းဈေးခြင်းလေးကို လက်တဖက်နဲ့ကိုင်မောင်းရင်း
” တီးတီး ”ဒေါ်နွယ်နွယ်ရှေ့ကလမ်းရှောက်သွားနေတာ ဖင်ကြီးက အပေါ်အောက် နှိပ့်တုန်မြင့်တုန်နဲ့အပေါ်စည်းချက်ကြကြ လှူပ်ခါနေတယ် ဝတ်ထားတဲ့တမိန်က အပျော့သား အနက်ပေါ် ပန်းပွင့်လေးတွေစိထားတယ် အင်္ကျီက အဖြူ ဖျော့ဖျော့လေးဝတ်ထားတယ် နေရဲ နောက်ကနေဆိုင်ကယ်ဟွန်းတီးလိုက်တော ဒေါ်နွယ်နွယ်ချိုက လည့်အကြည့်” ဟယ် သား မင်းဈေးသွားမလို့ဘဲလား”” ဟုတ်အန်တီ တက်သွားမယ်လေ ”နေရဲနောက်က လိုက်ရတာ ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို ရင်တွေခုန်နေမိတာတောအမှန်ဘဲလေ ကောင်လေးက သူမအပေါ်မရိုးသားဘူးဆိုတာသိပေမဲ့ အဲ့ဒါလေးကိုသာယာမိတာကို ဟွန့်တွေ့မယ် ကလိလိုက်ဦးမယ် နေရဲ ခါးလေးကိုလူပြက်တဲ့နေရမှာဖတ်သလိုလိုပြုတ်ကြမှာစိုးသလိုလိုနဲ့ တချက်တချက် လူပျက်တဲ့ နေရာမှာနေရဲရဲ့ခါးလေးကို ဖတ်ထားလိုက်တယ် လက်က ဖတ်ထားရင်း လျှာပြီ နေရဲ လီးကြီးနဲ့တဖြေးဖြေးချင်ထိလုလုဖြစ်ဖြစ်လာတယ် တချိန်ထည်းမှာဘဲ နေရဲ့ က ဆိုင်ကယ်ကို လမ်းဂျှိုမ့်ထည်းချ လိုက်တော ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို့ ရဲ့ လက်က နေရဲ လီးကြီးအပေါ်ကို ရောက်သွားတယ် ရုပ်တရက်ဆိုတော့ ဒေါ်နွယ်ချို နည်းနည်းလှန့်သွားမိသည် လက်ကို ချက်ချင်းပြန်ပြီရုပ်လိုက်တာပေါ ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို ထူပူသွားတာဘဲ သေသေချာချာကြီးကို လီးနဲ့ထိမိတာ ဟို့ အိမ်ထောင်သည်ဆိုတောလီးအကြောင်းကောင်းကောင်သိသည် သူမ ဒီလီးကြီးဘယ်လောက်ရှိမယ်ဆိုတာကိုတော မှန်းမိတာပေါ မသာလေးက အတွင်းခံဝတ်မလာပြန်ဘူး သူမစောက်ဖုတ်ကြီးက မနက်ကတည်းက စောက်ရည်တွေကလည့်နေတာ အခုလီးနဲ့ထိမိ ရင်ကလည်းခုန် ဟူး” သား အရှေ့မှာ ရပ်လိုက်ဦးအန်တီနွယ် ခဏ ဝယ်စရာရှိသေးတယ် ”
” အပြန်ကြဝင်ပြီးမဝယ်တောဘူး အခုတခါတည်း ဝင်ဝယ်သွားရအောင် ခဏ နော်သား ”” ဟုတ်တီနွယ် ”ဆိုင်အရှေ့ရပ်ပေးလိုက်တော သူမဆိုင်ထည်းဝင်သွားတော နေရဲအနောက်ကနေသူမ ဖင်အိုကြီးကိုကြည့်လိုက်တော အနောက်သူမှဖင်ကြီးမှာ စိုတိုတိုလေးဖြစ်နေတာကိုမြင်လိုက်မိတယ် ဟာ စော်ကြီးထနေတာဟ လမ်းမှာငါ့လီးကိုသူလက်နဲ့ကိုင်မိလိုနေမယ် ဟင့်ဟင့် တွေ့ကြသေးတာပေါ တီနွယ် ရယ် ဒီလိုနဲ့ မနက်တိုင်း နေရဲ့နဲ့ ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို ဈေးသွားတိုင် အတူသွားဖြစ်ကြတယ် နွယ်လည်း ခါတိုင်းထက်ပိုပြီအလှပြင်လာမိတယ် ဆိုတာကိုယ့်ကိုကိုယ် သတိတော ထားမိပါရဲ့ တခါတခါများ ယောက်ကျားသိမှာတောင်ကြောက်လာမိတယ် fb လည်းမဖွင့်ဖြစ်ဘူးလေ” နွယ် အလှတွေပြင်လွန်းနေပြီနော် မင်း ”” မိန်းမဘဲ ကိုမြင့်ထွေးရယ် လှချင်တာပေါ ” အေးပါ ငါဘာသံမှမကြားချင်ဘူးနော် ”ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပေမဲ့ စိတ်ကလည်းမခံချင်စိတ်ကလေးကလည်းရှိ သူခိုးလူမိဆိုသလိုပေါ ရှက်ရှက်ရမ်းရမ်း တောသည်||” နေပါဦး အကျွန်မ က ဘာဖြစ်နေလို့လဲ ”“အေး ငါသတင်းတွေကြားပြီးပြီ ကွ မင်းဟိုချာတိတ်နဲ့ မဟုတ်တာ တခုခုလုပ်နေတာမဟုတ်လား ပြောလေ´´“ အို့ ရှင်က ကျွန်မကို အရှက်ခွဲနေတာလား ကိုယ့်သားအရွယ်နဲဖြစ်စရာလားရှင်´´“ ကျွန်မ တို့ကရိုးသားလို့ ရပ်ကွက်ထည်းမှာပေါ်တင်သွားတာလေ ´´အမေနဲ့အဖေစကားများနေတာကြောင့် ကိုထွေး စိတ်ရှူပ်ရူပ်နဲ့အပြင်ထွက်လာခဲ့လေသည် ကြာရင်သူ့ကိုပါ မဲတောမယ်ဆိုတာသိပြီသား ဒါကြောင့် လမ်းထိတ်လက်ဖရည်ဆိုင်ထွက်သည် ၊၊“ ဟိုက် ဘဲကြီ လာပြီဟ ´´“ အေးအိမ်မှာ ဘွားတော်နဲ့ ဘိုးတော် စကားများနေလို့ကွာ ´´“ ဟင် ကိုထွေးဘာလို့လဲ ကွီ´´“ ပြသနာ ကတော မင်းငါ့အမေကိုဈေးကိုလမ်းကြုံခေါ်သွားတာကို ဘိုးတော်က ပေါက်တာဟေး ကြာရင်ငါ့ပါ မအေ ဈေးသွားတာ သားကလိုက်မပို့ရကောင်းလားဆိုပြီ ပြသနာရှာမှာစိုးလို့´´´“ Srooy ကိုကြီးထွေညီလေးက တကယ် စေသနာပ အကိုရယ် ´´အင်း ငါတော စော်ကြီးကိုစားရဖို့ဝေးပြီထင်တယ် နေရဲ တွေးပူနေတယ် မစားရဘဲစောက်ရှက်တော ကွဲတောမှာဘဲကွာ“ ငါသိပါတယ်ငါ့ညီရာ မင်းစိတ်ဓာတ်ကို ´´“ ခက်တာက အိမ်က အဖေက အသက်ကြီးမှအမေ့ကို သဝန်တိုနေတာကွ ´´“ ဟုတ် အကို ညီသွားရှင်းပြရင်ရမလား အကိုလည်းသိပါတယ်လို့ပြောရင်ရော ဦးလေးကိုလေ ´´“ ဟ လီးဘဲ ဘယ်ရမလဲကွ မင်းက ငါ့ပါ အိမ်ကနေမောင်းထုတ်အောင်လုပ်နေတာလား´´” ထားပါတော ဒါနဲ့ မင်းအခု ဈေးမသွားဘဲ ဘာလုပ်နေတာလဲ နေရဲ ”” အင် ညီလေး ဒီနေ့မသွားဖြစ်ဘူး ကိုကြီးထွေး အမေသွားမှာလေ ”ထိုစဉ်နေ ဟန်းဖုန်းမှာ အာဇာနီ သချင်း လေးနဲ့ ဖုန်းဝင်လာသည် နေရဲ့ကောက်ကြည့်လိုက်တော ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို့ဖုန်း ကိုထွေးကတောမသိ သူအာယုံက တော်တော် ရူပ်ထွေးနေပုံနဲ့ လက်ဖတ်ရည်ဆိုင်မှပြသော် အင်္ဂလိပ် ဇတ်ကားကြည့်နေလေသည် နေရဲ ဆိုင်အပြင်ထွက်ပြီ” ဟယ်လို ””…..”
” ဟုတ်အန်တီ သား အပြင်မှာ ကိုထွေးက ဆိုင်ထည်းမှာ ”” ဟုတ် သူမသိဘူးအန်တီဖုန်းဆိုတာ ”” …..”” ဟုတ်အန်တီ ခုလာပြီနော် စောင့်နေ”ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို သူကို ချိန်းတာ ဘာလို့လဲမသိဘူး တခုခုတောတခုခုဘဲ ရင်တထိတ်ထိတ်တောဖြစ်သား …” ကိုကြီးထွေ ညီလေးသွားစရာရှိသေးလို သွားတောမယ် ”ကိုထွေးကို နုတ်ဆက်ပြီး ထွက်လာခဲ့သည် ကိုထွေးကိုနုတ်ဆက်ထွက်လာပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောမလုံဘူးပေါလေ အခုသွားရမှာကလည်း သူအမေက ချိန်းလိုက်တာလေ ပြီးတော ကိုထွေးကိုလည်းအသိမပေးနဲ့ အန်တီဆီကို သားတစ်ယောက်ထည်းလာခဲ့ဆိုတော နည်းနည်းတော စဉ်းစားရကျပ်သွားပေမဲ့ ဆင်အရိပ်ပြနေတာ ကိုယ် ကျွဲထင်ရအောင် ငတုံးမှမဟုတ်တာနေရဲ ဆိုင်ကယ်လေးမောင်းပြီထွက်လာလိုက်သည် ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို ချိန်းတာက ဟိုဘက်ရပ်ကွက် နေရဲတို့ဘက် ရဲ့ တရပ်ကွက်ကျော် က လမ်းခြားလေးကိုလေ ဟော တွေ့ပါပြီ ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို အဝတ်ထုတ်နဲ့ ကြည့်ရတာ အိမ်ပေါ်ကဆင်းလာတယ် ထင်တယ် ယောက်ကျားနဲ့စိတ်စိုးပြီ နေရဲ ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို ရှေ့ကို ဆိုင်ကယ် ရပ်လိုက်တယ် ဆိုရင်ဘဲ” ကြာလိုက်တာ နေရဲ ရယ် အန်တီမင်းကိုစောင့်နေတာ ကြားလှပြီ ”” ဟုတ် သား ဟိုဘက်ကနေ ပတ်လာခဲ့တာ အန်တီ ”” သား တနေရာရာကိုသွားရာအောင် အန်တီ အိမ်ပေါ်က ဆင်းလာတာ အမ အိမ်ဆိုပြီ ”အင်ပြောမယ်သာပြောရတာ ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို ယောရ်ကျား လုပ်သူ ရွဲချင်စိတ်နဲ့ ထွက်လာခဲ့တာ အခု နေ့လည် 12. နာရီတောင်ရှိနေပြီ ဘယ်သွားရမှန်းတောမသိဘူး မထူးပါဘူး တည်းခိုခန်းတခုခုမှာ ခဏ သွားနေမယ်လို့ စိတ်ဆုံဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီ ကောင်လေးကြည့်ရတာလဲ ဒီနေရာမှာ ကောင်လေးကို မျော်မနေတောဘဲ သူဘာသာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချက
” သာ နေရဲ အန်တီကို ချောင်ကြကြ တည်းခိုခန်းကိုလိုက်ပို့ပေးပါလား ”” ဟုတ်ရပါတယ် အန်တီ တိုဘယ်လိုဖြစ်ကြတာလဲ ကျွန်တောကိုပြောဦးလေ ”” အဲ့ဒါတွေ ဟိုရောက်မှ အန်တီ သားကိုရှင်းပြမယ် ကဲ့အခုသွားစို့ ”သီရိစံအိမ် တည်းခိုခန်းကို ခေါ်သွားလိုက်သည် လူလည်းရှင်းတယ် အထူးသဖြစ် မှတ်ပုံတင်မလိုတဲ့ တည်ခိုခန်းပေါ အချိန်ပိုင်းလေတွေနဲ့နေတာများတယ်လေ အဲ့နေရာက နေရဲ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောဖူးတာနဲ့ပို့မယ်ပေါ စော်ကြီးက နေရဲခါးကိုအနောက်ကနေ ဖတ်ပြီလိုက်လာသည်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုဆိုတောလည်း စကားမပြောဖြစ်ပြန်ဘူး ဟိုရောက်တော အခန်းက နှစ်ယောက်ခန်းယူလိုက်တယ် စော်ကြီးက နှစ်ခန်းဘဲယူမယ်နော်ဆိုပြီသူဘာသာပြောပြီသူ့ဘာသာယူလိုက်ဝည် အခန်ထည်းရောက်တော” ဟူး စိတ်ညစ်တယ်နေရဲ ရေး အန်တီစိတ်ညစ်တယ် ”” ဟုတ်အန်တီပြောပါ ကျွန်တောကိုရင်ဖွင့်လေ အန်တီ ”မိန်းမ ဆိုတဲ့အမျိုးကလည်း သူမျက်ရည်ကြလေလေ ယောက်ကျားသားက ချော့ရင်ပိုပိုကြတက်တာကိုး စော်ကြီးကခုတင်မှာ ထိုင်ပြီ ကြိုက်ငိုနေတယ် နေရဲလည် ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို့ဘေးနာ ဝင်ထိုင်ရင် ပုခုံးလေးကို လေကလေးတင်ပြီ” မငိုပါနဲ့ အန်တီရယ် သားတစ်ယောက်လုံးရှိပါတယ် အားမငယ်ပါနဲ့နော် ”” ဟဟင့် အင့် ”နေရဲက ချောနေရင် ဒေါ်နွယ်နွယ်ချိုမှ နေရဲ ရင်ခွင်ထည်းကိုခေါင်းလေ တိုးဝေ့ ပေါ” သား ရယ် မင်းဦးလေးက အန်တီကို မဟုတ်တာတွေနဲ့ စွတ်စွဲလွန်းတယ် ပြီးတောလေ ”
တန့်သွားရင် ငို့ရှိက်သံလေးက ထွက်ထွက်လာတယ် နေရဲက ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို့ ကို ခါးလေးကိုပွတ်သက်ပေးရင်းနဲ့ ကျွန်တောရှိပါတယ်အားမငယ်ဖို့တဖွဖွပြောရင်လက်က ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို့ ရဲ့လက်ဂျိုင်းကြာကနေ ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို့ရဲ့နို့ကြီးတဖက်ကိုအသာလေ မထိ တထိလှန်းပွတ်နေတယ်ဒေါ်နွယ်နွယ်ချိုတဖြေးဖြေးနဲ့အငိုတ်ိတ်သွားရင်း အသက်ရူသံပြင်းပြင်းကိုကြားနေရတယ် သူရင်ခွင်ထည်းမှာ ခေါင်းလေငုပ်ပြီငြိမ်နေတဲ့ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို့နဖူးလေးကို ဖွဖွလေးနမ်းလိုက်တော ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို့ နုတ်မှ အို့ ဆိုသော်အသံနှင်အတူ နေရဲ ခါးလေးကို သူခါးလေးလိမ်ပြီ လက်နှစ်ဖတ်နဲ့ တင်းတင်းလေဖတ်နေတယ် နေရဲနဲ့ ဒေါ်နွယ်နွယ်ချိုက ဘေးတစောင်းအနေထားနဲ့ ကုတင်အစွန်ဘက်မှာအတူထိုင်နေတဲ့အနေထားဆိုတော နေရဲလည် ရဲတင်းလာတယ် နေရဲဘယ်ဘက်လက်တဖတ်က ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို့ ရဲ့ ကိုယ်လုံးကို လိုက်လှန်ပွတ်သက်ရင်က” ချစ်တယ် မ ရယ် ”” အို့. ဘာမှန်းလဲမသိဘူး လူဆိုး အခွင့်ရေးအရမ်းယူတယ် ”” ချစ်ခွင့်ပြုပါနော်မ ”” မသိဖူးကွာ ”မသိဖူးကွာသာ ညှု တူ့တူလေးပြောလေသည် နေရဲက ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို့ ခေါင်းလေကိူဆွဲမော့ရင် သူမ ရဲ့ဖွေးဖွေးဖြူနေတဲ့ပါးပြင်လေးက ၁၆ နှစ်သမီးလေးတစ်ယောက်လို ရှက်သွေးတွေဖျာနေတယ် ဖူးနေတဲ့ နုခမ်းထူထူလေးက နေရဲကိုစိန်ခေါ်နေသရောင်န့ နေရဲစိတ်တွေရ ထိန်းမရတောဘူး သူအရမ်းလိုးချင် နမ်းချင်နေတဲ့နုခမ်းလေးကို ဖိစုပ်နမ်းပြစ်လိုက်တယ် အွမ့်ခနဲ့ ဒေါ်နွယ်နွယ်ချိုအသံထွက်နိုင်တောသည် သူမှကလည် ကလေးတစ်ယောက်အမေ အိမ်ထောင်သည် တစ်ယောက်ဆိုတော နေရဲ အနမ်းတွေကိုပြန်လည်တုန့်ပြန်အနမ်းတွေပေးနေမိတယ် နေရဲလက်တွေက ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို ရဲ့ ကြီးမားထွားကြိုင်းပြီ အိနေတဲ့ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို တဖတ်တချက်စိဆုပ်နယ်ကစားပေးနေရင် အားမရစွာနဲ့ ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို အင်္ကျီကို ချွတ်ပေးနေမိတယ်
” မ အင်္ချီတွေချွက်လိုက်တော နော်မ ”” အင့် ”ဒါဘဲ တလုံးထည်းဘဲ လူချင်းခွာပြီ နှစ်ယောက်လုံး အသက်ရူသံတွေ ပြင်းပြနေမိသည် တလောကလုံးကိုမေ့နေကြတယ် သူတို့ကမ္ဘာလေးမှာသူတိုနှစ်ယောက်ဘဲရှိတာလေ. ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို အင်္ချီချွတ်နေချိန်မှာ နေရဲ ကူချွတ်ပေးလိုက်တယ်ဖွေးပြီ သွေးကြောလေးတွေစိမ်းနေတဲ့ ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို နို့နှစ်လုံးက နေရဲကို မှင်သက်မိန့်မောစေတယ် အနက်ရောင်ဘောလီလေးက လိုက်ဖတ်စွာရှိနေတယ် နေရဲ ဒေါ်နွယ်နွယ်ချိုကို ပတ်လက်လေးဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ် ဒေါ်နွယ်နွယ်ချိုအပေါ်ကိုနေရဲ အပေါ်ကအုတ်မိုးလိုက်ရင် ဒေါ်နွယ်နွယ်ချိုနုခမ်းလေးကိုနမ်းရှိက်ရင် သူလက်တွေကနိုကြီးအပေါ်ကိုရောက်သွားသည် အလွန်နုညမ်ပြီ ဆုပ်နယ်ရသည်မှာအားရစရာကောင်းလွန်းလှတယ်နေရဲပုဆိုးဝတ်ပြီ အောက်ခံဘောင်းပြီဝက်မလာခဲ့ဘူး နေရဲလီးကြီးက တောင်တင်းနေပြီ တချက်တချက် ဒေါ်နွယ်နွယ် ချို ပောင် ကိုထောက်မိတယ် ဒေါ်နွယ်နွယ်ချိုကလည်းအောက်ကနေ သူပေါင်ကိုကားပေးလိုက်တော နေရဲလီးကြီးက သူမ စောက်ဖုတ်ကြီးကို ထောက်မိနေတာ တချက်တချက် တွန့်သွားမိတယ် စောက်ရည်တွေကလည် အရမ်းထွက်နေမိသည် သူမ ဒီလီးကြီးကြောင့်ပြသနာ ဖြစ်ခဲ့တာ ဒီလီးကြီးနဲ့သူအရမ်း ကိုအလိုးခံချင်နေပြီ သူမစောက်ဖုတ်ကြီးကလည်ဂုဏ်ညင်းဖားကြီးလို ဖောင်းပြီးမို့တက်နေမိသည်နေရဲ့လက်တဖတ်က နို့ကိူဆုပ်နယ်ရင်းက ကျန်လက်တဖတ်ဖြစ် သူမ ပေါင်ကြားထည်းကိုနေရာရွှေ့လိုက်ရင် သူမ ထမိန်ကို ချွတ်လိုက်လေသည် သူမအလိုက်တသိ ခါးလေကြွပေးလိုက်တော သူမရဲဖြူဖွေးပြီးချော့်မွတ်နေတဲ့ပေါင်တန်ကြီးနှစ်ခုကြားမှာ ရဲရဲတောက်နေတဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးပေါ်လာသည် နေရဲလက်က သူမစောက်ဖုတ်ကို အတွင်းခံဘောက်ဘီအပေါ်ကနေ အသာလေအုပ်ကိုင်ပွတ်သပ်ပေးလိုက်တော ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို ခန္ဒာကိုယ်လေ တချ တွန့်ခနဲ့ ဖြစ်သွားသည် အရည်တွေရွဲနေတဲ့ သူမ စောက်ဖုတ်ကြီးကိုလက်ခလည်လေးနဲ့ မထိတထိလေးပွတ်ပေးလိုက်ချိန်မှာ ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို့မှာ” အို့ အဟင့် အင်း အား မောင့် ”
​မောင်လို့တောင်ခေါ်နေမိသည် သူမ စိတ်တွေအရမ်းထန်နေပြီ နှါကြီးသူပီပီ သူ အမေက ရှမ်းစပ် ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို စောက်ရည်တွေအရမ်းကိုရွဲ နေပြီ နေရဲက သူမ နို့အုံကိုဖုံးထားတဲ့ ဘောလီကို ချွတ်ပေးလိုက်တယ် ပြီးသူမ ရဲ့ ရွှေကျူပ်လေးကိုဖုံးအုပ်ထားတဲ့အတွင်းခံ ကိုလည်း တပါတည်းချွတ်လိုက်တော သူမမှာ မိမွေးတိုင်ဘမွေးတိုင်းပုံစံဖြစ်၍ သွားသည် နေရဲလည်းသူအင်္ချီကိုချွတ်သူပုဆိုးကိုလည်းချွတ်နေချိန်တွင် ဒေါ်နွယ်နွယ်ချိုမှာ မသိမသာလေး နေရဲ ပုဆိုးချွတ်နေချိန်လှန်းအကြည့် အို့ခနဲ့ဖြစ်သွားသည် နေရဲ လီးကြီးမှာ သူမ ယောက်ကျား ကိုမြင့်ထွေးလီးကြီထက် သုံးပုံ ပုံ တပုံလောက်သာနေသည်သူမ ယောက်ကျားလီးကြီးမှာအရှည် ၅ လက်မ ကျော်ကျော် အခုနေရဲလီးကြီမှ၆လက်မ ကျော်ကျော်ခန်ရှိပြီအတုပ်မှာသူမယောက်လောက်ရှိသည် နေရဲသူမ. ပေါင်နှစ်လုံးကို ကားစေပြီ သူမပေါင်ကြားကိုနေရယူလိုက်သည်နေရဲလက်တဖတ်က သူလီးကြီးကိုကိုင်ပြီ ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို့ရဲ့စောက်ရည်တွေရွဲနေတဲ့စောက်ဖုတ်ကြီးကိုအပေါ်အောက်ပွတ်ဆွနေမိသည် အညိုရောင်သန်းနေတဲ့ ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို စောက်ဖုတ်မှာ ရာဂ စိတ် တွေ ထကြွလာမိသလို နေရဲ လီးကြီးမှာသူမစောက်ခေါင်းဝနာဖြေးဖြေးချင်ထိတွေ့လာမူ့ဟာ ဝူအတွရ် သူအရမ်းလိုချင်နေတဲ့လီးတစ်ချောင်းရသလိုစိတ်ထည်းမှာအမြန်ထည့်စေချင်နေသည် နေရဲကလည်း သူလီးကြီးကိုဒေါ်နွယ်နွယ်ချို စောက်ခေါင့်ဝကိုတေ့ချိန်ပြီ ဖြေးဖြေးချင်းလီးကြီးကိုထည့်လိုက်လေသည် နေရဲ လီးကြီးသူမစောက်ခေါင်းထည်း ဝင်လာသည့်အရသာကို ဖြေဖြေချင်းခံစားနေလေသည် နေရဲမှာလဲ ဒေါ်နွယ်နွယ်ချို ကိုလိုးရရဝည်မှာ စည်းပိုင်နေတာဘဲ” အားကောင်းလိုက်တာ မရယ် မစောက်ဖုတ်ကြီးက လိုးရအရမ်းကောင်းတာဘဲနော်မ အား ”” အင် မောင် ရယ်မက အလိုးမခံတာကြပြီလေဟွန့် ”ဒေါ်နွယ်နွယ်ချိုမှာအောက်က အလိုးခံရင်နဲ့ မျက်စိလေးမှေးပြီ ကာမ အရသာကိုကောင်းစွာခံစားနေလေသည်။